१४:३८, १४ मे २०१३ जस्तै गरी पुनरावलोकन
१४:२७, १४ मे २०१३ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
सा (HotCat द्वारा श्रेणी:नेपाली सहिदहरू जोडियो)
१४:३८, १४ मे २०१३ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
[[File:Dasarath chanda.jpg|thumb|200px|right|शोभा भगवतीमा रहेको शहीदसहिद दशरथ चन्दको प्रतिमा]]
'''दशरथ चन्द'''को जन्म वि.सं. १९६० असारमा [[बैतडी जिल्ला]]को बस्कोटमा पिता शेरबहादुर चन्द र आमा ओजकुमारी चन्दको कोखमा माहिला छोराका रूपमा भयो। शहीदसहिद माइला भन्नाले दशरथ चन्द बुझिन्छ। उहाँमा पितालाई [[सुर्खेत जिल्ला|सुर्खेत]]मा टुँडिखेल बनाउने लेफि्टनेन्ट शेरबहादुर चन्दका नामले चिनिन्छ। राणाशासनका विरोधीहरूमा सबैभन्दा सशक्त व्यक्तित्व स्व. चन्दले मानविकी तथा समाजशास्त्र विषयमा [[वाराणसी|बनारस]]बाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो। त्यसअघि उहाँले [[नेपालगञ्ज]], [[अल्मोडा]], [[कुमाउँ]], [[नैनीताल]] जस्ता ठाउँमा पढनुभयो।
त्यहीबेला उहाँ काशी नागरिक प्रचारिणी सभामा रहेर राजनीति गर्न थाल्नुभयो। [[महात्मा गान्धी]]ले भारतमा[[भारत]]मा प्रारम्भ गर्नुभएको सत्याग्रहमा उहाँले सक्रियरूपमा भाग लिनुभएको थियो। वि.सं. १९९० साल [[बारा जिल्ला]]को मौवादहमा [[टंकप्रसाद आचार्यसँगआचार्य]]सँग दशरथको पहिलो पटक भेट भयो। वि.सं. १९९१मा उहाँ सहयोगी शिवदत्त भट्टका साथ बर्मा पुग्नुभयो।पुग्नुभयो । त्यसपछि [[थाइल्याण्ड]] पुगेर नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने योजना बनाउनु भयो। उहाँ नेपाल प्रजापरिषद्को कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सेवासिंह भन्ने छद्मनामबाट राणा विरोधी लेख छाप्नुहुन्थ्यो। दशरथ चन्द र [[गङ्गालाल श्रेष्ठ]] एउटै जेलको कोठामा पर्नुभएको थियो। तत्कालीन राणा सरकारले वि.सं. १९९७ माघ १५ गते दशरथ चन्दलाई [[शोभा भगवतीमाभगवती]]मा गोली हानी मृत्युदण्ड दियो। उहाँ अविवाहित नै शहिदसहिद हुनुभयो। दशरथका जेठा बुबा रबी चन्द र कान्छा बुबा सुबेदार दलबहादुर चन्द थिए भने माइलाका दाईदाइ गोकर्ण चन्द थिए। भाइ ललित चन्द पनि २०५१ सालमा बिते। चश्मा लगाउने दशरथ चन्द गाउँमा प्रत्येक घरमा जानुहुन्थ्यो। दिदी, बहिनी, भाउजूहरूसँग ख्याल-ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई भोक लागेमा जुन घरकी भाउजूसँग पनि मागेर खान हिच्किचाउनु हुन्थ्यो। मोही शहीदलाईदशरथलाई खुब मनपर्थ्यो।
बनारसमा स्नातक सकेर आउनु भएका युवा दशरथको विवाह काठमाडौंको[[काठमाडौं]]को राणा खानदानकी जुलिया मैयासँग गर्न भनेर दुईपटक जन्ती गए तर केटीको परिवारमा 'जुठो सुत्केरो' परेकाले विवाह हुन सकेन, जन्ती रित्तै फर्क्यो।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/338784" बाट अनुप्रेषित